सिटिजन बैंकका लगानीकर्ता निराश: नाफा घट्यो, खराबकर्जा बढ्यो Bizshala -
सिटिजन बैंकका लगानीकर्ता निराश: नाफा घट्यो, खराबकर्जा बढ्यो
citizens bank international nepal
काठमाण्डौ । कमजोर व्यवस्थापन र अदूरदर्शी नीतिका कारण समकालीन बैंकहरुले नाफा बढाइरहँदा सिटिन्जस बैंकले भने नाफा घटेको बित्तीय विवरण सार्वजनिक गरी लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ । यो बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि नाफा घटेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरी सेयरधनीलाई उदास बनाएको थियो । दोश्रो त्रैमासमा बैंकको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षामा बसेका लगानीकर्ता अन्ततः जिल्ल पर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
यो बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोश्रो त्रैमासमा ८२ करोड ८६ लाख खूद नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष यही अवधिमा यो बैंकको नाफा ६३ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
बैंकको ब्याज आम्दानी भने बढेको छ । गत वर्ष ८५ करोड ५१ लख रुपैयाँ रहेको खूद ब्याज आम्दानी बढेर यो वर्ष ९७ करोड ४१ लाख रुपैयाँको उचाईमा पुगेको छ ।
बैंकको ब्याज खर्च अचाक्ली वृद्धि भएका कारण नाफा घटेको देखिएको छ । ब्याज खर्च घटाउन नसक्नु व्यवस्थापनको असफलताको संकेत हो ।
अघिल्लो वर्ष ब्याज खर्च १ अर्ब १८ करोड छँदा यो वर्ष बढेर २ अर्ब २७ करोडको उचाईमा पुगेको छ । महंगोमा निक्षेप लिएर बैंक चलाउनुपर्दा ब्याज खर्च केही बढ्नु स्वभाविक भए पनि सिटिजनको जस्तो अनियन्त्रित भएर बढ्नुको एउटै कारण कमजोर व्यवस्थापन रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अर्को, महत्वपूर्ण सूचक खराब कर्जा समेत बढेको देखिएको छ । यो बैंककै आगामी प्रगतिका लागि समेत बाधकको संकेत हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा १.३२ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा बढेर यो वर्ष १.९४ प्रतिशतको उचाईमा पुगेको हो । बैंक नेतृत्व खराब कर्जा असूलीमा समेत असफल देखिएको छ । गत वर्ष दोश्रो त्रैमाससम्म झण्डै ७० करोड खराब कर्जा असूल भएकोमा यो वर्षको त्यही अवधिमा १४ करोड २६ लाख मात्र त्यस्तो कर्जा असूल भएको छ ।
बैंकको जगेडाकोषमा सामान्य सुधार देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको दोश्रो त्रैमाससम्म १ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेको कोषमा यो वर्ष १ अर्ब ९९ करोड जम्मा भएको छ । बैंकले संभावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राखेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५.६६ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ १२४.८७ रुपैयाँ र मूल्य आम्दानी अनुपात १८.२० गुणा कायम भएको छ ।
citizens bank international 2nd quarter-2074-75
तिलोत्तमाको शंकरनगर र कोटिहवामा शाइन रेसुङ्गा बैंकको शाखा
रुपन्देही । बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शाइन रेसुङ्गा...
अमलेखगञ्जस्थित आयल निगम परिसरमा प्रभू बैंकको काउण्टर
काठमाण्डौ । प्रभू बैंक लिमीटेडले बाराको अमलेखगञ्जस्थित नेपाल आयल...
एनबी बैंकले पनि रु. २ अर्बको ऋणपत्र निश्कासन गर्ने, वार्षिक
काठमाण्डौ । नेपाल बंगलादेश(एनबी) बैंकले २ अर्ब बराबरको ऋणपत्र...
माइक्रोफाइनान्समा पनि मर्जर/एक्वीजिसनको सुरुवात, साधनाले
काठमाण्डौ । पूँजी वृद्धिको नीतिसँगै लघुवित्त कम्पनीहरुमा पनि...
गरिमा बैंकको सामाजिक काम, ऋणिको मृत्युपछि रु. १.४९ लाख ऋण
काठमाण्डौ । गरिमा बिकास बैंकले एक मृतक ग्राहकको ऋण मिनाहा गरेको छ...
प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरुको कञ्जुस्याइँ
काठमाडौँ । वाणिज्य बैंकहरुले कूल कर्जाको २५ प्रतिशत कृषि, पर्यटन र...
आइजीआई र मुक्तिनाथ बैंकबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाण्डौ । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स(आइजीआई) लिमिटेड र मुक्तिनाथ...
पोखराको पावरहाउस चोकमा एनआइसी एशिया
काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंक लिमीटेडले कास्कीको पोखरास्थित...